[Ukara] Wondershare TunesGo Ochie (Mac) [MobileGo for iOS (Mac)]
TunesGo Ochie (Mac)
Best iTunes Companion: Nyefee Music n'etiti iDevices, iTunes na Mac
Gbalịa Ọ Free N'ihi Mac OS X 10.6 - 10.10 Buy Ugbu a
Awesome, ngwa ngwa, dị nnọọ kensinammuo na mfe iji. Mgbe (unsuccessfully) agbalị ịkpali họrọ audio si m Mac ka Iphone ihe karịrị 30min, m na-n'ụzọ nkịtị na-eti na obi nkoropụ banyere iTunes. Gị ngwaahịa edozi m nke na sekọnd 30 ... Ekele !!
Mbụ, abụghị m onye Tekno geek (ọ dịghị ihe ọjọọ inference) m kpam kpam nyochawa aka. M na-akpọ nwa m na-abịa na ihichapụ foto m apụ m iPad Air 2, n'ihi na m na-enweghị ụlọ iji mee ka onye nweta nkwalite. Ọ na-otú lie ọrụ ya oru na-adịghị nwere ohere iji dobe na, m arụnyere na iOS version maka Mac, ọ dịghị nsogbu, m melite iPad dị ka a gwara na mgbe a ole na ole ikpe na njehie, Bam! M bụ ike ihichapụ 6gbs nke na-achọghị photos. M na enwetara ndị ileef iBridge nchekwa flash mbanye na ugbu a nwere m niile photos na ya nakwa dị ka m music anatara, ngụkọta 20gbs, m na ka nwetara 40gbs nke ụlọ na m flash mbanye, ịtụnanya! Get a na-eji ya na-edozi gị mbipụta, na enweghị m ike ọ na m na-eji iTunes n'ihi na ọ bụ kwa convoluted, a na ngwa na-ese siga ya niile !!!
- Frank Romo
Ọ arụ ọrụ dị ukwuu, o mere ka ndụ m mfe. Nyefee m music si Emmanuel ka MacBook Pro ma ọ bụ Anglịkan dịtụbeghị nnọọ mfe. Ekele ụmụ okorobịa, ị maara n'ezie ihe ị na-eme.
- Omar Gonzalez
Nice software iji ya.
My Mac ama nwụrụ na mberede, nwụnahụrụ m iTunes music. N'ihi ya, m chere na m \_ kpụrụtụ-efu ndị songs ruo mgbe ebighị ebi ruo mgbe a search hụrụ m MobileGo for iOS. Ọ na-arụ ọrụ flawlessly idetuo music si m iPod aka ka m iTunes music Library on Mac.
gbalịrị ya na ndị ọhụrụ na OS X Mavericks. Ọ na-eme dị ịtụnanya ọrụ idetuo songs si m iphone 5s OS 7 na iMac. Ị mere nke ọma!
M ji MobileGo for iOS (Mac) ruo afọ ụfọdụ ugbu a na m nnọọ obi ụtọ ka nwere ike ikwu ya. M ji ya ọtụtụ ugboro nkwado ndabere na mpaghara m iphone m MacBook ikuku.
- Olee otú
itunes bụ keokuko na ngwa ngwa! MobileGo for iOS Mac bụ ihe kasị mma ọzọ si n'ebe
Fantastic ngwaahịa !!! m MacBook pro dị nnọọ jiri, furu efu iTunes Library. Ngwaahịa a wughachi m itunes n'ọbá akwụkwọ site ebufe songs m \_ 'Anụla zọpụta na m iPod Touch.
Ntak emi Họrọ TunesGo Ochie (Mac)
Ị nwere ike adịghị adabere iTunes wughachi gị iTunes Library ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara music, videos, photos, olu memos, wdg gị Mac. Ọ nnọọ ike ime ya. Kama, ị mkpa a transfer software ngwá ọrụ dị ka Wondershare TunesGo Ochie (Mac). Ọ bụ ọkachamara iPhone / iPod / iPad manịja Mac. Ọ bụghị nanị na-eme ihe iTunes nwere ike ime: transfer music, videos na foto iPhone / iPod / iPad, kamakwa-eme ihe iTunes apụghị ime: ka ị idetuo iPhone / iPod / iPad music na listi ọkpụkpọ (smart listi ọkpụkpọ gụnyere) gị iTunes Library na Fim, play adabere & skips ma ọ bụ nkwado ndabere na mpaghara videos, photos, olu memos, Pọdkastị na ndị ọzọ ka gị na Mac. Ugbu a, ị ga-agaghịkwa nchegbu banyere mbipụta mgbe ijikwa songs, foto, na video.
Export Music na listi ọkpụkpọ site na iPod / iPhone / iPad ka iTunes na Ratings na Play mkpa
Ma na ị zụta a ọhụrụ Mac kọmputa ma ọ bụ furu efu music si gị iTunes Library, ugbu a na Wondershare TunesGo Ochie (Mac), ị nwere ike mbupụ niile music na listi ọkpụkpọ na gị iPhone, iPad na iPod aka / kpochapụwo / ịkpọgharịa / nano gị iTunes Library on Mac na Fim, play adabere & skips. Ihe bụ ihe ọzọ, nke a mma mgbe duplicates ọ bụla song ma ọ bụ playlist ị na nwere on iTunes Library. Ọ pụtara na ọ bụ naanị na-ebupụ songs na listi ọkpụkpọ gị adịghị ugbua nwere na gị iTunes Library si iPhone, iPad, iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo gị iTunes Library.
Cheta na: "Smart Mbupụ na iTunes" dị iche iche site "Mbupụ na iTunes". Site na ndabara, "Smart Mbupụ na iTunes" na-ahapụ gị mbupụ niile music na gị iDevice (iPhone, iPod aka / nano / ịkpọgharịa / kpochapụwo, ma ọ bụ iPad) na iTunes Library nzacha si ndị ugbua na gị iTunes Library. "Mbupụ na iTunes" pụtara na ọ bụ naanị Nyefe songs na ị na-ahọrọ na gị iDevice ka iTunes Library on Mac.
Nyefee Music, Videos, na Photos on iPhone, iPod & iPad ka Mac
Chọrọ ndabere ụfọdụ songs na vidiyo na iPhone, iPod aka, ma ọ bụ iPad gị Mac si ike mbanye? Ọ bụ na ị iwere ọtụtụ photos na gị iPhone, i kwesịrị iṅomi ha na Mac maka inwekwu edezi? Na Wondershare TunesGo Ochie (Mac), nanị họrọ music, videos, ma ọ bụ foto na iPhone, iPod aka na iPad na ị chọrọ na pịa "Export ka Mac" nyefee ha ka ha iMac, MacBook Pro ma ọ bụ MacBook Air.
Ugbu a, Wondershare TunesGo Ochie (Mac) na-ahapụ gị nyefee music na listi ọkpụkpọ na zuru Ama si iPod ịkpọgharịa / nano / kpochapụwo ka Mac.
Nyefee na music, Pọdkastị, iTunes U, audiobook, na olu memos ka Mac.
Nyefee na fim, TV na-egosi, music videos, wdg ka Mac.
Export Igwefoto Roll na foto ọba iji Mac.
Tọghata na Nyefee Songs & Videos on Mac ka Play na gị iPhone / iPod aka / iPad
Nwere ụfọdụ na-egbu songs & video, ma ike nyefee ọ bụla n'ime ha na-iPhone, iPod aka, ma ọ bụ iPad maka play? Nọgidenụ na-uwe elu on. Ka TunesGo Ochie (Mac) eme ya n'ihi gị. Mgbe ọ bụla ị Dọrọ otu kedi faịlụ ka iPhone, iPod aka, ma ọ bụ iPad site TunesGo Ochie (Mac), ọ ga-tọghata faịlụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị n'ihi na ị. Na ọ dịghị mgbe-ehichapụ mbụ faịlụ na ngwaọrụ gị. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ Nyefe foto site na Mac ka iPhone / iPod aka / iPad dị ka mma.
• tọghata ọdịyo faịlụ na AC3, AMR, adaka, FLAC, MKA, MP2, OGG, WMA, ka MP3 maka iPhone, iPod aka na iPad.
• tọghata vidiyo na AVI, FLV, 3GP, mpg, 3GPP, 3G2, TP, TS, TRP, MTS, M2TS, DV, MKV, MOD, WMV, ASF, F4V, DAT, NSV, VOB, RMVB, DivX na ndị ọzọ na- M4V maka iPhone, iPod aka na iPad.
Ofụri Esịt Jikwaa Music, Videos, na Photos on iPhone, iPod aka & iPad
Wondershare TunesGo Ochie (Mac) bụ ngụkọta iPod aka, iPhone, & iPad faili. Jiri ya jikwaa music, videos, foto, na albums, nnọọ ihe ọ bụla media faịlụ, na iPhone, iPod aka, na iPad mfe na rụọ ọrụ nke ọma.
Nyefee music na listi ọkpụkpọ na iPhone, iPod aka, na iPad na gị na iTunes Library na Fim, igwu egwu adabere & skips.
Nyefee music, videos, foto, na albums gị Mac maka ndabere.
Ike ọhụrụ listi ọkpụkpọ na iPhone, iPod aka, na iPad na ikpuru-n-dobe.
Nanị pịa ịgbakwunye media faịlụ site na Mac ma ọ bụ hichapụ faịlụ site na gị iDevices.
Mee albums site Ịdọrọ na idobe foto site na gị igwefoto Roll ma ọ bụ Photo Library.
N'ihi gịnị ka ọ na-akpali imechi iTunes dị ka mmekọrịta ọrụ bụ na iji?
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na m ngwaọrụ ada ada jikọọ.
Gịnị na ngwaọrụ ma iOS na-akwado site na ngwaahịa?
Gịnị na-eme ma ọ bụrụ na m iPod Omuma / Nano / ịkpọgharịa ada ada jikọọ?
Top Ụzọ ndabere gị iPhone Tupu Jailbreak iOS 7
Olee otú Detuo iPhone Music Ratings & Play mkpa ka iTunes
Otú nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Mac
Otú nyefee Videos si iPad ka Mac
Record audio ọ bụla na nkwanye audio isi mmalite, gụnyere web videos, na redio ụgbọ, na-ewu ewu weebụsaịtị ka YouTube, Pandora, na ndị ọzọ. Mụtakwuo
Wondershare TidyMyMusic maka Mac NEW
Zuru okè iTunes enyi iji hazie gị niile music collections. Chọta efu ọmụma, album artwork na lyrics mfe. Mụtakwuo